Wadarta Daryeelka - Foton Motor Group Co., Ltd.
Foton Global profile ganacsi shaqeynaya
Istaraatijiyad horumarineed ee caalamiyeynta
Awood casriyeyn heer caalami ah
Iibinta gawaarida cagaaran ayaa kaalinta koowaad ka galay warshadaha sanadihii isku xigxiga
Kiiska ugu fiican
Taariikhda kiiska macaamiisha way wada shaqeeyaan
GAADIIDKA DHAMMAAN & SHAQADA-XILALKA
BASKA & KOOXAHA
Bandhigyada gawaarida ee suuqa
Tartamada mootooyinka caalamiga ah
Xasaasiyad u leh bilaabista, tijaabinta tijaabada iyo la macaamilka macaamiisha
1,485 xarumo adeeg oo ku yaal in ka badan 80 dal iyo gobol
Qaybaha caalamiga ah ayaa la bixiyaa
Iyada oo ku saleysan Hongkong, FOTON maalgelinta dibedda waxay ballaarisay ganacsigeeda adduunka oo dhan
Ku soo dhowow inaad ku soo biirto kooxdeena
nidaamka adeegga caalamiga ah
Waxaan ku tiirsannahay shabakadda qaybinta adduunka oo dhan si aan u siino dadka isticmaala heerarka alaabada, adeegga, qalabka, tababarka iyo taageerada farsamada. Foton waxay si tartiib tartiib ah u bilawday adeegga "Wadarta Daryeelka". Iyada oo leh xarun qaybinta is-taageerida ee 13, xarunta tababarka adeegga 12, in ka badan 1500 shabakadaha adeegga dibedda, Foton waxay si joogto ah u horumarisay nidaamkeeda adeegga caalamiga ah si ay ugu qanciso macaamiisha u baahan daryeel iyo inay u fidiyaan khibrado qoto dheer iyaga Foton wuxuu diiradda saarayaa baahiyaha macaamiisha baahiyaha xayeysiinta iyo abuurista dhammaystiran, oo xambaarsan adeegyo shaqsiyeed iyo xirfadle ah oo loogu talagalay macmiilka.
Xarunta Qeybinta Qeybaha Dunida
hubi wadista saxda ah
Dhammaan daryeelka dayactirka nolosha si loo hubiyo wadista saxda ah. Adeegyo kaladuwan oo qiimo ku darsaday ayaa macaamiisha u keenaya qiimo dheeri ah, oo muujinaya daryeelka daacadnimo ee FOTON Ku qabashada dood cilmiyeed dhexdhexaad ah si loo fahmo dalabyada macaamiisha ee ku saabsan sameynta horumar joogto ah iyo raadinta heer sare.
Qalabka tijaabada iyo dayactirka ee horumarsan, dammaanad qaadka qalabka oo dhan; kooxda adeegga hogaamineysa oo ka kooban nidaam tababar oo xoog leh iyo farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah.
Nidaamka macluumaadka caalamiga ah ee PMS, EPC, WMS, DMS iyo CRM ee loogu talagalay maareynta isku dhafan ee qaybaha 3 ee bixinta iyo alaabada (xarunta qaybaha caalamiga ah, xarunta qaybaha xarunta iyo xarunta adeegga (wakaaladda gaarka ah)), taas oo hubinaysa waddooyinka qaybaha siman. macaamiisha ayaa dib ugu eegay khadka tooska ah.
100% qaybo sax ah, qiimo jaban, dayactirka qiimaha gaariga; qiimaha qaybaha hufan, qiimaha saacadda shaqada iyo habka dayactirka; marinno siman oo loogu talagalay cabashooyinka macaamiisha.
NETWORK EE ADEEGA BANAADIRKA
Dabool gobollada waaweyn
FOTON waxay hirgalisay shabakad adeeg dibadeed oo ka kooban 1,485 xarumo adeeg oo ka kala jira in ka badan 80 waddan iyo gobollo, oo ay ku jiraan 168 xarumaha-1 maaraynta xarumaha adeegga adeegga iyo 1,317 heerka-2 iibiyeyaasha adeegga, iyo 149 heer-1 iibiyeyaasha iibka iyo 1,205 heerka-2 iibiyeyaasha iibka iibka, oo ka hadlaya gobollada ugu muhiimsan ee Aasiya, Ameerika, Afrika iyo Yurub.
Siyaasad adeeg hoggaamineed warshadeed
Isagoo diiradda saaraya qanacsanaanta macaamiisha, FOTON waxay ka shaqeysay siyaasad adeeg hoggaamineed warshadeed si ay u siiso macaamiisha muddo dammaanad dheer ah Nidaamka adeeggu wuu ku kala duwan yahay noocyada, khadadka alaabada iyo moodeellada. Faahfaahinta nidaamka damaanad qaadka iyo siyaasadda dammaanadda khasabka ah, fadlan tixraac buuga dammaanadda darawalnimada.
TABABARKA ADEEGA BANAADIRKA
tababarka adeegga oo dhan
FOTON waxay dejisay 12 xarumood oo lagu tababaro adeegyada Thailand, Russia, Vietnam, Saudi Arabia, Kenya, Cuba, Peru, Chile, Iran, Philippines, Columbia iyo Algeria. FOTON hadda waxay siisaa koorsooyin tababar in kabadan 100 dal iyo gobol. FOTON waxay siisaa alaab-qeybiyeyaasha adeegga tababar dhan oo adeeg ah iyadoo loo marayo xarumaha tababarka adeegga ee adduunka oo idil. Xarumaha tababarka ayaa sidoo kale bixiya saldhigyo adeeg oo cusub oo ku saabsan tababarka maareynta adeegga iyo teknoolojiyada adeegga si looga caawiyo xarumaha adeegga inay ula qabsadaan FOTON iyo si ay u siiyaan adeeg wanaagsan macaamiisha.
Kooxda ayaa hadda ka kooban 30 macallin, oo ka kooban in ka badan 20 luqadood, oo ay ku jiraan Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Carabi iyo Ruush. Xarumaha tababarka ayaa bixiya tababar ku saabsan maareynta adeegga, qaybaha maareynta saadka iyo injineernimada adeegga, iyadoo looga dan leeyahay in macmiil kasta la siiyo waxbarasho hal-joogsi ah.
TABABAR KU SAMEEYA
Khadka Taleefoonka Adeegga Macaamiisha Foton Global
Isku qor si aad u hesho macluumaad ku saabsan moodeelka aad ugu jeceshahay
Foton jaleeco Istaraatiijiyad Cusbooneysiin Suurtogalnimada Codsiyada
Gawaarida Rakaabka Gawaarida xamuulka qaada Gawaarida dhexdhexaadka ah & kuwa culus baska & tababaraha
Muuji Case Ciyaaraha Gawaarida Bandhigga Gawaarida
Wadarta Daryeelka Qalabka Foton Maaliyadda
nala soo xiriir shaqo & shaqo